I-T3 ecaleni kwechibi imbonakalo ephefumlayo yeentaba! - I-Airbnb
I-T3 ecaleni kwechibi imbonakalo ephefumlayo yeentaba!
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCeline
Irentisa indlu entsha eyi-56 M² e-Savines le lac e-Haute-Alpes, iibhedi ezi-5, amagumbi okulala ama-2 kunye nethafa le-10M² enombono omangalisayo wechibi kwindawo yokuhlala ekhuselekileyo.
Ibekwe ngokufanelekileyo phakathi kwezibuko kunye nolwandle lukamasipala, kunye nemizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka kumbindi weSavines apho uya kufumana zonke izinto eziluncedo: iivenkile zokutyela, indawo yokubhaka, imarike encinci, ikhemesti, ivenkile yeencwadi, icuba, iofisi yabakhenkethi, njl.
Ikhitshi elixhotyisiweyo livulekele kwigumbi lokuhlala / lokutyela kunye nethafa elijonge echibini kunye neentaba.
2 okulala real. Umandlalo omtsha kunye nomgangatho olungileyo (ibhedi enkulu).
Igumbi lokulala 1: 1 ibhedi ephindwe kabini 160x200.
Igumbi lokulala 2: Ibhedi e-1 enye kunye neebhedi ezi-2 zebhedi 90x200. Nceda uqaphele, ibhedi ephakamileyo ifanelekile kuphela kubantwana abaneminyaka engama-6 ubudala, ayikhuthazwa ngabantu abadala.
I-terrace enefenitshala (itafile e-1 kunye nezitulo ezi-6).
Khusela indawo yokuhlala ngekhowudi yedijithali kunye nendawo yokupaka yabucala.
Imidlalo yabantwana kunye nepaki yokutyibiliza ecaleni kwendawo yokuhlala.
Ulwandle lufakelwe kwaye lujongwe emazantsi esakhiwo kunye ne-snack bar.
Ukusuka kwi-terrace, unokuzonwabela iincopho ezijikelezileyo kwaye uthathe ithuba lokuba kufutshane kwezibuko ukuze ubone izikhephe ziqalisa!
UKUBA ukhuthele, akukho ngxaki! Inkitha yemisebenzi yamanzi iyafumaneka echibini: ukusefa, iinqanawa ezinyovwayo kunye namaphenyane (emazantsi eflethi), ukutyibiliza emanzini, ukusefa, ukuhamba ngesikhephe, i-aquapark, ii-buoys ezirhuqwayo, ...
Kwaye abathanda entabeni; kukho into zonke ezithandwa kunye onke amanqanaba: usapho ukuphuma hambe echibini, tobogganing ehlotyeni, ukuqabela, paragliding, ezemidlalo ukunyuka intaba phezu ziphakamileyo (Mont Guillaume, Aiguilles de Chabrières, Pic de Morgon ...) iParc des Ecrins ivulelekile kuwe!
Enyanisweni, iimbaleki zidibana apho unyaka wonke kwiindlela ezininzi kunye nemidyarho yazo zonke iintlobo.
Awuyi kukwazi ukwenza yonke into, kodwa uya kuba nokuqhuma !!!
Umlilo ngooLwezithathu eSavines le lac: ukususela ngoJulayi 13 ukuya ku-Agasti 18: ukuzonwabisa kunye nomlilo wadubula kanye phambi kwendlu!
I-Medieval Embrun: ekupheleni kuka-Agasti
Embrunman Triathlon: Agasti 15
Umnikezeli wethu wenkonzo kunye nam siya kuba ngabafowunelwa bakho abakhethekileyo kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Iyafumaneka kwaye iyaphendula, siya kuba nakho ukuphendula yonke imibuzo yakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Savines-le-Lac